Chinyorwa 13 chinobvumidzwa neEuropean Paramende chinokanganisa sei Internet? | Linux Vakapindwa muropa
Chinyorwa 13 chinobvumidzwa neEuropean Paramende chinokanganisa sei Internet?
Nezuro zvakasimbiswa kuti MEPs dzavhota hongu kune iyo nyowani Chinyorwa 13 na11 (yava kunzi 15 ne17) ine nharo sei. Uyu mutemo mutsva unokanganisa zvakanyanya rusununguko rweInternet, uye zvinonyadzisa chaizvo kuti havazive nezve kuvhota zvakanaka kwechinyorwa chino. Asi zvinonyanya kurwadza kuona kuti avo vakavhotera, vazhinji vavo, havana kuvhota nekuti vanofunga seizvi, asi kutsvaga mavhoti, nekuti kufunga uku kwakanyanya pakati pevatsigiri vavo uye mapato ezvematongerwo enyika aripo anoita kunge makambani. kupfuura kufanana nemachisi.
Ivo vanowanzo nyora kune rimwe divi kana rimwe racho zvichienderana nemukurumbira wezvavanoita uye kana vachizowana mavhoti kana kwete. Kungofanana nekambani inoita nebazi rayo rekushambadzira. Gadzira kuongororwa kwemusika uye zvinoenderana nemari (chinjana mari yemavhoti uye uchaiwana) iyo yavanenge vachizohwina, vanoita chinhu chimwe kana chimwe. Asi kuti uite izvi, kutanga iwe unofanirwa kugadzira chinodiwa mune vanhu ava, saSteve Jobs akanyatsoshandiswa paApple. Uye kugadzira izvo zvinodiwa muvanhu zvine chekuita nezvematongerwo enyika isu tine nzira dze "kutaurirana" dzinokamura huwandu hwevanhu, infoxate kana kushandisa mune dzakawanda zviitiko.
Ini pachangu ndinotenda kuti mushandirapamwe wekurwisa shanduko idzi wave wekuti vazhinji vashandisi vatenda kuti izvi zvinogona kutonyanya kupfuura zvazvave. Saka alarms kunze, Internet icharamba ichishanda sepakutanga. Uye kune mushandisi wemasevhisi hakuzove nemusiyano. Uye ivo vagadziri vachazongofanira kubata nhevedzano yezviyero zvitsva zvezvirimo zvavo. Naizvozvi handisi kureva kuti vanofara neshanduko, asi kuti dzimwe nguva vanotitaurira kuti zvese zvichave njodzi yenyika uye hazvina kudaro. Kufanana nefuruwenza A, semuenzaniso, kuti yaizove iri denda repasirese, kuti mamirioni avanhu anofa, achiienzanisa neBlack Denda, nezvimwe. Y? Chii chaitika? Zvakanaka izvo ...
Zvakanaka, nezvakataurwa, ikozvino tinoenda kune chaiko chinoshanda, ndokuti, zvichatikanganisa sei uyu mutemo mutsva wekopiraiti kune zuva nezuva kuInternet, izvo muchidimbu kuunza iyo yekusefa sisitimu kana kodzero dzakasimba dzakadai iyo YouTube ine iyo yeInternet yese:
Mapuratifomu ese, uye izvo zvinosanganisira saiti senge Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Wikipedia, uye mamwe maWiki saiti, Github, nezvimwe. shandisa mafirita akasimba uye anodzvinyirira kuve nechokwadi chekuti zvirimo zvinoburitswa hazvityori copyright uye kana zvikadaro, bvisa zvirimo ipapo ipapo. Izvi zvingaite senge zviri nyore, asi mutemo unonzwisisika zvekuti unogona kushandiswa kubvisa zvirimo zvakawanda ... Semuenzaniso, Google yakazvimisikidza pachayo kunyangwe YouTube yagara ichirambidza sei, zvatinoyeuka kuti yakamanikidza kubviswa yevhidhiyo kubva mukududzirwa kwerwiyo naBach apo iye ari munyori akafa muna 1750 uye zvinofungidzirwa kuti copyright haichashande kana munyori anga afa kweanenge makore makumi manomwe ... Kana Google pachayo yakapa vhidhiyo rwiyo "Despasito" semuenzaniso waFonsi, kuti vaizofanira kuibvisa kubva kuYouTube nemutemo mutsva uyu, uye sekudaro cansion vamwe vazhinji. Sei? Zvakanaka, apa ndipo panouya kusanzwisisika, uye kunyangwe ivo vane mvumo yekuparadzira zvakataurwa kuburikidza nhevedzano yezvibvumirano nevanyori uye zvichingodaro, dzimwe dzekodzero dzechinhu ichocho hachizivikanwe uye vakatadza kumisikidza. Ndosaka mavhidhiyo mazhinji epuratifomu yazvino anoburitswa anogona kubviswa.
Kuti zviri pamusoro zvizadzike, zvinoreva kuti tarisa nguva dzose uye zvakanyanya Zvese zvirimo zvinoburitswa paInternet.
ari vanyori ikozvino vaine zvakanyanya kuomarara uye zvinokanganisa mhando uye huwandu paunenge uchitsikisa pamablog, Youtube, Instagram kana mamwe mapuratifomu, nekuti ivo vanofanirwa kungwarira uye vachenjere kusagovana zvine copyright zvinyorwa, kunyangwe ari mabasa ehunyanzvi, mifananidzo yemifananidzo, mimhanzi, vhidhiyo, zvinyorwa, nezvimwe.
La rusununguko rwekutaura, kuvanzika, mamwe matanho ebhizinesi uye kugadzirwa kwekutanga vanotyisidzirwawo neshanduko idzi.
Izvi zvichaita zvakatowanda ane simba uye mukuru kune yakatove huru ...
Zvinhu zvakanaka zvemitemo, nekuti varipo zvakare, kunyangwe ini ndisingafunge kuti vanogadzirira vakaipa ...
Nyika dzese dziri nhengo dzeEU dzichange dziine 2 makore kugadzirisa izvi zviyero. Izvo hazvizove shanduko huru, asi inofambira mberi.
Zvino mamwe masevhisi anofanira kunge ari yakajeka nevanyori nevapepeti kana vamwe vanyori tinogona kuwana rumwe ruzivo rwatisina kupihwa kare.
Iyo copyright kana copyright kune avo vanyori vari kutsigira urwu rudzi rweruzivo rwezvivakwa kodzero.
Dzvinyiriro dzekubvisa Europe mabasa Google nemamwe mahofori zvakakonzera kuti mitemo ibvumire mune zvimwe zvinhu, senge:
Mukutaura, mitemo iyi yairambidza kunyange share snippets kodhi, vhidhiyo, mimhanzi, nezvimwe. pasi pekodzero. Ndokunge, zvinhu zvisina mhaka sekugovana Meme nemufananidzo wemuvhi zvaizorambidzwa. Nekudaro, mumutemo wekupedzisira izvi hazvisizvo, uye mabasa akachengetedzwa anogona kuiswa kunetiweki kuti ataure, kushoropodza, kuongorora, caricature, parody kana kutevedzera. Saka memes, maGIF, nezvimwe, zvicharamba zviripo.
Goverana zvidimbu zve zvinyorwa uye mapikicha Izvo zvakare hazvirambidzwe neiyi miniti yekupedzisira kugadzirisa. Nhau dzeGoogle dzichakwanisa kuenderera mberi nekugovana nhau zvinyorwa uye mifananidzo pasina dambudziko muEurope. Uye seni, mamwe mapuratifomu.
Services se Spotify zviri pamutemo zvachose uye ivo vanozokwanisa kuramba vachishanda zvakajairika, nekuti ivo vanobhadhara mvumo kune vanyori.
Kune izvi zvese, tenda chiGerman Voss, ideologue yeiyi shanduko ... uyezve mapato akavhotera, izvo zvaunogona kuona muzvinyorwa nenyika pamambure. MuSpain, PP, PSOE, Ciudadanos, PDECAT, PNV uye chikamu cheIU chakavhota vachida kupasisa iyi yakaipa mitemo. Podemos, ERC, ICV uye EQUO vakavhota vachipesana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chinyorwa 13 chinobvumidzwa neEuropean Paramende chinokanganisa sei Internet?
Ikozvino yave kuwanikwa chii chichava Ubuntu 19.04 Beta 1 mune ayo ese epamutemo kuravira